Sunday January 03, 2021 - 10:16:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Qarax xooggan oo ka dhacay waqooyiga Maali ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 2 askari oo katirsanaa ciidamada Faransiiska gaar ahaan guutada labaad ee melleteriga wadankaasi.
Warsaxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Élysée ee dalka Faransiiska looga arrimiyo ayaa lagu sheegay in miino lagu aasay wadada hareeraheeda ay ku dhinteen laba askari meel ku dhow magaalada Haagiinaaw.
Warka kasoo baxay xukuumadda Faransiiska waxaa lagu caddeeyay in gaari nuuca gaashaaman ah oo ay ciidamadu la socdeen uu haleelay qarax aad uxooggan kadibna ay askartii ku sugneed dhimasho iyo dhaawac noqdeen.
Madaxweynaha faransiiska ayaa si kulul udhaleeceeyay weerarkan wuxuuna ku eedeeyay wax uu ugu yeeray argagaxiso oo uu ula jeedo mujaahidiinta Nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada wadamada mandiqadda Saaxilka afrika oo dalka Maali uu ka mid yahay.
isbuucii lasoo dhaafay ayay aheyd markii qarax sidaan oo kale dalka Maali uga dhacay loogu dilay sedax askari faransiis ah waxaana mas'uuliyadda weerarkaas sheegatay jamaacada Nusratul islaam walmuslimiin.